निर्मला पन्त प्रकरणको खुलासाः रवि लामिछानेको साथमा अदालतमा को हुन् तँ बयाँन दिने? – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/निर्मला पन्त प्रकरणको खुलासाः रवि लामिछानेको साथमा अदालतमा को हुन् तँ बयाँन दिने?
निर्मला पन्त प्रकरणको अपडेट:गत कार्यक्रम हेरेपछि हाम्रो सम्पर्कमा आएकी एक महिलाको बयान आजको कार्यक्रममा समावेश छ। सुरक्षा र गोपनियताको ग्यारेन्टी भए अदालतमा आफ्नो बयान दिने उनले निर्णय गरेकी छिन्। कार्यक्रममा उनको आवाज परिवर्तन गरिएको छ।तर सरकारकालागि उनको बयानको रेकर्डिङ हु बहु उपलब्ध गराउने बाचा गर्दछौ।आगे सरकारको मर्जी
निर्मला पन्तको हत्यारा दिलिप विष्ट नै हुन सक्छ तर डिएनए नमिल्दा मुद्दा चलाउन सकिएन : गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले कञ्चनपुरकी बालिका निर्मलाको हत्यारा दिलिपसिंह विष्ट नै हुन सक्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सोमबार गृहमन्त्री बादलले सो कुरा बताउनुभएको हो । सांसद राधेश्याम अधिकारी, विमलादेवी आले (राना) र चन्द्रबहादुर खड्काले निर्मलाको हत्या भएको वर्षदिन बित्दा समेत हत्यारा पत्ता किन लगाउन सकिएन भनी सोधेको प्रश्नमा गृहमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘प्रमाण नपुग्दा दिलिपसिंह विष्टविरुद्ध मुद्दा चलाउन सकिएन । उनीविरुद्ध धेरैजसो प्रमाण जुटेका छन् तर डीएनए रिपोर्ट नमिल्दा अपराधी उहीँ नै भन्न सकिने अवस्था रहेन ।’
उहाँले सो प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धानमा चुकेको स्वीकार गर्नुभयो । प्रहरीबाट गल्ती भएको भन्दै यसरी गल्ती गर्ने प्रहरी अधिकृतहरुलाई निलम्बन गरी कारबाही समेत गरिसकेको बताउनुभयो ।
सांसदहरुले दिलिपसिंह विष्टमाथि धेरै प्रमाण जुटिसक्दा पनि किन उनीलाई नै दोषी करार गर्न नसकेको भनी प्रश्न उठाएका थिए । साथै उनीहरुले हाइप्रोफाइल व्यक्ति हत्यामा संलग्न रहेको भए किन त्यसको निक्र्यौल भएन भन्ने प्रश्न समेत गरेका थिए । जवाफमा गृहमन्त्रीले केही अनुसन्धान जटिल प्रकृतिका हुने हुनाले निर्मलाको केसमा पनि कठिनाइ आएको बताउनुभयो । यद्यपि नयाँ ढंगबाट अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले हत्यारा ढिलोचाँडो पत्ता लाग्ने समेत आश्वासन दिनुभयो